We Fight We Win. -- " More than Media ": '' လူ့ဘောင်သစ်ခေါ်သံ ''
'' လူ့ဘောင်သစ်ခေါ်သံ ''
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သင်တို့ 
အနာဂတ်တွေ ကို လူ့ဘောင်သစ်မှာ ရှာဖွေပါ။
လူတွေရယ် ဘယ်လိုပင် ရယ်သွေးသွမ်း ပါစေ
ကိုယ့်အိမ်မက်တွေကို ကို်ယ် တည်ဆောက်ဝံတဲ့ယောက်င်္ကျား
ကိုယ့်အိမ်မက်တွေကို ကိုယ် တည်ဆောက်ဝံတဲ့ မိန်းမ
လူ့ဘောင်သစ်သို့သွား ကြလော့။
ငါဒို့ နဲ့သူတို့ ခြားနားမှုတခုက
ငါဒို့ဟာ မနက်ဖန် ခါတွေကို စိတ်မ၀င်စား အားသေးဘူး။
ငါဒို့ဟာ ဒီနေ့ ကို ပို စိတ်ဝင်စားကြသူတွေဖြစ်တယ်။
ငါဒို့ နာကျဉ်မှုတွေကို ဒီနေ့လွတ်မြောက်စေချင်တယ်။
ငါဒို့ ပျှော်ရွှင်မှုတွေကို ဒီနေ့ လုိုချင်တယ်။
လူ့ဘောင်သစ်ရဲ့မွေးနေ့ဟာ သင်တို့ ရဲ့မွေးနေ့ ဖြစ်တယ်။
လူ့ဘောင်သစ်ရဲ့သမိုင်းဟာ သင်ရဲ့တောက်ပြောင်တဲ့သမိုင်းသာဖြစ်တယ်။
လူ့ဘောင်သစ်ရဲ့အိမ်မက်တွေဟာ သင်တို့ ရဲ့ အိမ်မက်တွေသာဖြစ်တယ်။
လူ့ဘောင်သစ်ဟာ ညီအကိုတော်တွေ အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။
မုန်တိုင်း ရဲ့အပြင်းထန် ဆုံး နေရာမှာ
လူ့ဘောင်သစ်ရဲ့အန္တိမက
လွတ်လပ်ခြင်း ( Liberty )
ညီမျှခြင်း ( Equality) ဒေသနာတရား
ထွန်း ကား ပို့ ပါပဲ။
သင်ဟာ လူ့ဘောင်သစ်ရဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်အဖြစ်နဲ့ငိုကြွေးနေတဲ့ ညတွေကို ခ၀ါချဖို့ 
အရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပ ဖို့ 
သင့်ကို လူဘောင်သစ်က အလုိုရှိနေတယ်။
Mother of Democracy Amay Su want to do fully 100% democracy.She believe without fully democracy,can not build as rich country.singapore has 40%,Malayshia has 35%,Thai has 75% demo.Even they r rich,they r slave and animals because they have no 100% democracy human right..We dont want to be like this.Must get 100% fully democracy first.Lets do it.Please wait 75% poorMyanmar people.food is not first,100%demo is first.wait.Without 100%,can not build as rich country.even NLd win 2015 and get 75% at Htuttaw,can not do rich because of 25% army .she will not join 2015 if 25% army is still in htuttaw.
Like · Reply · 18 hours ago · Edited
i hope DPNS to compete in 2015 election.i want an electoral alternative to NLD in case of 88 generation student leaders sitting out of 2015.there isapolitical void to the left side of NLD in today electoral politics.